Hawaii ubizo Holiday - Dogs, Cats, Pets
Hawaii – Visting nge isilwane sakho
Igcine ukubuyekezwa: May. 25 2018 | 2 imiz ufunde
Hawaii kuyinto ngamarabi State free kanti Continental United States akuzona, Kanjalo ezifuywayo ayizange bavunyelwe ukungena Hawaii ngaphandle bangena ngokuhlukaniswa.
The Hawaii esiShayamthetho bayakuqaphela ukubaluleka kokuhamba abanikazi bezilwane washintsha imithetho ukuze izivakashi Islands kungaletha pet yabo kanye. Okwamanje imithetho kuphela isicelo Dogs & Cats.
Ngisho bacabanga abazange kwenza kwaba lula futhi kuyabiza, uma ulungiselela kahle bayohlala adedele isilwane sakho kuwe ngokushesha phezu befika esikhumulweni sezindiza Honolulu.
Isinyathelo One – Wezilwane Certificate – Kumele kube original – No amakhophi. Lesi sitifiketi kufanele esikhishwa wezilwane wakho hhayi ngaphezu 14 izinsuku ngaphambi kokufika yakho eHawaii.
Imigomo: The pet kumele aye ukugoma okungenani kabili isikhathi sokuphila kwalo isifo samarabi nalabo imigomo kumele kube ngaphezu 90 izinsuku ngaphandle. Uma umgomo kwaba ilayisensi ngonyaka-eyodwa ke wokugoma yakamuva kumelwe ukuba kwenziwe hhayi ngaphezu 12 izinyanga ngaphambi kokufika the pet ngo Hawaii. Uma umgomo kwaba ilayisensi engu-3-ke wokugoma yakamuva kumelwe ukuba kwenziwe hhayi ngaphezu 18 izinyanga ngaphambi kokufika e-Hawaii. Kunoma yikuphi wokugoma yakamuva kumelwe ukuba kwenziwe akukho ngaphezu 90 izinsuku ngaphambi kokufika e-Hawaii.
The isitifiketi wezilwane wakho kumele asho yakamuva usuku lokugoma, kanye odlule usuku lokugoma. Isitifiketi kufanele akhombise igama wokugoma, lot noma inombolo ye-serial, esiphakamayo sokuphumula, wokugoma date, usuku lokuphelelwa futhi ukuthi kwaba of the unyaka owodwa noma emithathu uhlobo ilayisensi.
Impilo Enhle: Isitifiketi kufanele asho ukuthi isilwane impilo enhle nokuthi uye waphathwa for Imikhaza hhayi ngaphezu 14 izinsuku ngaphambi kokufika e-eHawaii umkhiqizo Fibronil noma umkhiqizo elingana abupheli. Khombisa on the isitifiketi usuku ukwelashwa kanye nomkhiqizo esetshenziswa.
Isinyathelo Two – Microchip The isitifiketi wezilwane wakho kumele asho inombolo microchip futhi kumele aqukethe iqiniso lokuthi wezilwane wakwazi ukuskena chip ngempumelelo.
The chip kumele zibe US daba standard (Avid) noma (Home Again) uhlobo. The microchip kumele eyakhekile itshalwe ngaphambi test igazi pet sika.
Isinyathelo Sesithathu – OIE-FAVN Amarabi Blood Test Kufanele ube nesitifiketi kusukela laboratory oluvunyiwe okubonisa ukuthi Chile isivivinyo okungaphezulu kophawu noma okulingana to 0.5IU / ml. Isitifiketi kufanele ibonise inombolo ezifuywayo microchip. The test igazi kumelwe kwenziwe hhayi ngaphezu 18 izinyanga hhayi ngaphansi kuka 120 izinsuku ngaphambi kokufika e-Hawaii.
Udokotela wezilwane Your kufanele athathe isampula legazi kusuka isilwane sakho bese ngomkhumbi it to:
Isinyathelo sesine – Isicelo Thumela imiklamo lezi zincwadi – no amakhophi to:
Buyela isheke izisebenzi noma imali ukuze in the amount of $165.00 isilwane.
Imibhalo and isheke kumelwe lufike 10 izinsuku ngaphambi kokufika the pet sika. Njengoba imibhalo ngeke olungiselelwe wezilwane wakho ngaphezu 14 izinsuku ngaphambi kokufika kumelwe ukuthumele by Federal Express afanelekele ukukhululwa sezindiza of the pet.
Isinyathelo Five – Ukufika Ungawungenela Hawaii kuphela ngokusebenzisa Honolulu International Airport kanye kuphela phakathi amahora 8 am futhi 9 pm. Pet Your ezakususwa sezindiza esikhungweni ngokuhlukaniswa sise 99-951 Halawa Valley Road, Aiea, Hawaii 96701 – Telephone 808 483-7151.
You ziyoyizwa isilwane sakho ngaleso indawo
Ukufuya isilwane kuba ngempela ukuphila izimpilo. Futhi kuwo wonke lawo abathandi isilwane out…
Ngokuzayo uya away, ngabe kungcono ukuba ibhizinisi noma injabulo, ungase ufune…
I am a umuntu kakhulu ebalisisiwe. Konke engikwenzayo okuhleliwe baphenyisise, konke engikuthandayo…